Hery Rajaonarimampianina : “Mandroso hatrany na eo aza ny mpanakorontana” -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : “Mandroso hatrany na eo aza ny mpanakorontana”
hentitra dia hentitra ny filoham-pirenena Hery Rajanaorimampianina manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny, indrindra ny fanakorontanana. Anisan ‘ny nambarany tamin ‘izany ny fanakorontanana ara toe-karena izay misy amin ‘izao fotoana izao, toy ny fanangonam-bary »ilaina ny ady atao amin’ ireo tsy mataho-tody amin’ny fampiakarana ny vidin’ entana »,nalainy ohatra amin’izany ny zava-misy aty amin’ny renivohi-paritanin’ ny faritra Atsinanana »efa midangana izay tsy izy ny vidim-bary, ary horaisina ny fepetra mifandraika amin’ izany ». Noho izany dia fahavalom-pirenena avokoa ireo manao sy manatanteraka ny fanakorontanana ireo, ary handray andraikitra manoloana izany ihany koa ny fitondram-panjakana »iadiana sy ho fongorina ny mpanakorontana ary ho mafy ny ady atao amin’ny kolikoly sy ny tsy fandriampahalemana ». Ho an’ny Filoham-pirenena dia tokana ihany no laharam-pahamehany ary niverina hatrany io fomba fiteniny io, dia ny maha laharam-pahamehana ny fampandrosoana »Rehefa vonona dia azo atao ny asa fampandrosoana, ary izay tsy vonona ho amin ‘izany dia aleo izy ho any » hoy hatrany ny Filoham-pirenena tamin’ny feo hentitra.
Noho izany, na dia misy aza ireo mamboly korontana eto amin’ny firenena, ary misy tokoa ny minia manao izany, dia nilaza ny Filoha fa « mandroso hatrany na dia misy aza ny minia manao izany asa fanakorontanana izany sy mamboly tsy fandriampahalemana », nanitsy ny fanontaniana izay napetraka taminy mihitsy aza ny Filoham-pirenena amin’ny sakana izay mipetraka amin’ny fampandrosoana izay minia misy mamboly « tsy sakana amin’ny fampandrosoana ireny, fa isika dia miroso hatrany ». Manoloana ny tsikera izay hinihana volena indray kosa dia tsotra ny fanazavana nomen’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina « ireo izay tsy manao indray no mitsikera, nefa izy ireny tsy mahavita inona akory ». Mikasika ny zava-misy ankehitriny ihany koa manoloana ny ady lahy isan-tokony dia nilaza ny Filoha fa « mandala ny fampihavanana aho ary ho an’ ireo antoko politika dia hatsaharo hatreo ny ady lahy eny ambony latabatra fa ny fampandrosoana no ilaina ». Noho izany finiavana goavana izany dia niantso ny vahoaka ny Filoha manoloana izao fanamby lehibe izao « efa vonona ny Filoham-pirenena miandry anao vahoaka izy; fanakorontanana ny firenena, ny fiarahamonina mila anao hiady amin’ izany ».
Manoloana indrindra ny fahavononan’ny Filoham-pirenena amin’ny asa fampandrosoana, dia tsy nisalasala mihitsy ireo vahoaka tany an-toerana tamin’ny alalan’ny solombavambahoaka tany an-toerana hanohy ny asa izay efa natomboka « betsaka ny asa vita a/toa Filoha, mangataka anao izahay mponina eto Nosy be hanohy ny asa ary hirotsaka ho fidiana ho Filoham-pirenena indray ». Tsapa avy hatrany fa tafapaka any amin’ny vahoaka ny fampandrosoana izay tanterahin’ny fitondram-panjakana ankehitriny ka antony tsy nampisalasala azy ireo ny fanohizan’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina hatrany ny asany. Ny Filoha moa andaniny dia sahy nilaza hatrany tamin’ny kabariny teny amin’ny seranam-piaramanidina Fascene sy ny teny amin’ny hopitaly ben’ ny Nosy Be nandritra ny fanokanana ny ivontoerana Vonjy ny hijerena ny ho avy « avelao ho any ny lasa aza mijery ny aoriana, banjino ny ho avy, ny fampandrosoana no andao hiaraha-manao «